९ सय पुरुषसँग सेक्स गरेर बिश्व रेकर्ड ! « Deshko News
९ सय पुरुषसँग सेक्स गरेर बिश्व रेकर्ड !
विश्व रेकर्डका शौखिनहरु हदैसम्मको ब्यवहार गर्न पछि पर्दैनन् । उनीहरुको आ-आफ्नै शैली र तरिका छ संसारभर चर्चित बन्ने ।
यस्तै होडमा रहेकी एक अमेरिकी पोर्नो फिल्म स्टार लिसा स्र्पासले सुन्दा पनि लाजै लाग्ने काम गरेर नयाँ रेकर्ड बनाएकी छिन् । लिसाले केवल १२ घण्टामा ९ सय १९ पुरुषहरुसँग यौन सम्बन्ध राखेकी थिइन् । अर्थात औषतमा हेर्दा प्रत्येक ४५ सेकेन्डमा एक पुरुषसँग लिसाको तातो सम्बन्ध थियो ।
लिसाले यस्तो लाजमर्दो रेकर्ड अक्टोवर १६, २००४ मा तेस्रो वाषिर्क विश्व गङबाङ च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा बनाएकी थिइन् । पोल्याण्डको वार्सामा आयोजित इरोटिकन ‘पोर्न सम्मेलन’ को एक अंशको रुपमा उक्त प्रतियोगिता सञ्चालन भएको थियो ।
प्रतियोगितामा लिसालगायत यसअघिकी रेकर्ड होल्डर (एक दिनमा ७ सय ५९ पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको रेकर्ड) र अर्की एक महिलाको पनि सहभागिता थियो । आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्द्विभन्दा बढी २१ पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्दै लिसाले नयाँ रेकर्ड कायम गरेकी हुन् ।
प्रतियोगिता निष्पक्ष होस् भन्नाका लागि रेफ्रीहरुको अलवा ६ क्यामेराबाट घटनालाई लाइभ खिचिएको थियो ।